Ogaden News Agency (ONA) – Poliska Australiya oo diiday in wadankaas lagu qabto Baroor diiqda Zenawi.
Poliska Australiya oo diiday in wadankaas lagu qabto Baroor diiqda Zenawi.
Dowlada Australiya ayaa joojisay in Males Zenawi loogu sameeyo tacsi wadanka Australiya. Dad kasoo jeeda Ethiopia oo badankoodu yihiin jawaasiis iyo dad u shaqeya gumeysiga Ethiopia ayaa waxay lacag badan ku bixiyeen inay kireystaan goob shaaric ah halkaasna ay shaashad weyn oo TV ah ay ku daawadaan aaska kaligii taliye Zenawi oo ka socday TV-ga Ethiopia.
Hadaba isku daygan ayaa waxa ka horyimid Poliska magaalada Melbourne oo dadkii isugu yimid meeshaas ka ceydhiyay una diiday inay baroordiiqda iyo aaska zenawi goobtaas shaarica ah ku qabsadaan.
Waxaana loo diiday in ay sameyaan Appeal oo ka doodaan. Poiliska ayaa u sheegay dadki Woyanuhu soo kiireystay in aan loo ogoleyn inay waxan sameyaan, islamarkaasna aysan ka doodi kaba furneyn. Meesha kukala taga sida ugu dhaqso badan.
Wadanka Australiya ayaa arrintan muujinaysa in dictator loo ogoleyn in loogu baroor diiqo.
Waxaana lagu shaaciyay arrintan TV-yada wadanka Australiya oo sheegay in Polisku hor istaagay kaligi taliye Zenawi in loo sameyo baroordiiqdaas.
Polsika Magaalada Mellbourne ayaa hada ka hor sidaas oo kale albaabada u laabay shir ay masuliyin kasocda woyanaha uu kamid ahaa Cabdi UBO rabeen inay ku qabsadaan Melbourne.
Gumeysiga Ethiopia ayaa ku qasbay shacabka ku nool Ethiopia iyo waliba Dhulka Ogadeniya ee uu gumeysto in loo soo baxo Zenawi loona tacsiyadeeyo qofki laga waayo ay dhibaato ku dhici karto.
Magaalada Addis Ababa ayaa ciidan 100, 00o kor u dhaafaya isugu yimaadeen wadooyinka si loo suggo nabad galyada. Waxaana xabsiyada loo taxaabay dad aad u faro badan oo looga shakisnaa inay banaanbaxyo sameyaan maalinimadi Axada.